एमालेमा अराजकता बढ्यो, अनुशासित पार्टी रहेन: पृथ्वीसुब्बा गुरुङ [अन्तर्वार्ता] « Sutra News
एमालेमा अराजकता बढ्यो, अनुशासित पार्टी रहेन: पृथ्वीसुब्बा गुरुङ [अन्तर्वार्ता]
२१ जेष्ठ २०७९, शनिबार १२:०१
गएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा मुलुककै सबैभन्दा ठुलो पार्टी ( नेकपा एमाले)ले आफ्नो अपेक्षित रुपमा मत प्राप्त गर्न सकेन । पार्टी हार्नुमा एमालेभित्रैका नेताहरुले अन्तर्घात गरेको कुराले सर्वव्यापी रुपमा चर्चा कमाइरहेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको एरियामा पनि एमालेले ठुलै हार व्यहोर्न पुग्यो । उनी र एमालेकै संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीबीचको टकरावका कारण एमालेको त्यस्तो स्थिति बनेको भन्ने विषय पनि माथि नै रहेको छ ।
मुलुकभरको अंकगणितलाई नियालेर हेर्दा एमालेले अहिले ठुलै जनमत गुमाएको जस्तो देखिएको छ तर एमालेका नेताहरुले यसलाई स्वीकारेका छैनन् । एमालेले झन् बढी जनताको मन जितेको नेताहरुको दाबी छ ।
एमालेले अहिले एउटा पनि महानगरमा जित हात पार्न सकेन । यसले आगामी संघीय चुनावमा ठुलो धक्का पर्ने सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।
समग्र विषयलाई लिएर नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङसँग सूत्रन्यूजले कुराकानी गरेको छ ।
प्रस्तुत छ कुराकानीको अंश:
स्थानीय चुनाव २०७४ र अहिलेको चुनावलाई लिएर हेर्ने हो भने एमालेले धेरै जनमत गुमाएको छ । समग्रमा यो अवस्थालाई तपाईले कसरी नियाल्नुभएको छ ?
चुनावमा हामीले हार व्यहोर्नुपर्यो । मुलुकमा भएका दोस्रो, तेस्रो, चौथो पार्टी मिलेर लडेपछि उनीहरुसंग हामी हार्नु त्यस्तो केही होइन । एक्लाएक्लै लडेको भए हामी सबैभन्दा बढी शक्तिशाली थियौं । उग्रदक्षिणपन्थीहरू, वामपन्थीहरु यथास्थितिवादीहरु सबै मिलेर एमालेविरुद्ध लागेपछि हामीले सोंचेको जस्तो नतिजा आएन । हामीविरुद्धको यत्रो घेराबन्दीको बीचमा पनि हामीले लोकप्रिय मत प्राप्त गरेकै हो । हामीले उत्साहजनक मत प्राप्त गरेकै हो ।
चुनाव अगाडी तपाईंहरुले आफूहरुले नै बढी सिट जित्ने दाबी गर्नुभएको थियो । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतका नेताहरुले जनमत आफ्नै पक्षमा आउने दाबी गर्नुभएको थियो । गठबन्धन यति धेरै शक्तिशाली हुन्छ भनेर सोंचुभएको पक्कै थिएन होला ?
गठबन्धन शक्तिशाली त होइन तर गठबन्धनको धेरै नेगेटिभ पाटोहरु छन् । तर गठबन्धनलाई हेर्ने हो भने नतिजा हाम्रो अपेक्षाअनुसार नै रहेको छ । एक्लाएक्लै लडेको भए हामीले ६७ प्रतिशत मत ल्याउने भन्ने थियो । गठबन्धन भयो भने कम्तीमा हामीले ५० प्रतिशत बढी मत ल्याउन सक्छौं भन्ने अंकगणित थियो । त्यो भन्दा पनि अझै गठबन्धनमा धाँधली र अरु नै केही भयो भने बिग्र्यो भने, चरम पैसाको खोलो बगाए भने हामी ३० प्रतिशतमा खुम्चिन सक्छौं भन्ने आंकलन हो । समग्रमा हेर्दा गठबन्धन त्यति धेरै शक्तिशाली होइन । गठबन्धनबीच एमालेले ठिकै मत प्राप्त गरेको छ ।
यही गठबन्धन कायम रहने हो भने आगामी संघीय चुनावमा एमाले थप बढारिन सक्ने सम्भावना देखिन्छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एसका माधवकुमार नेपालले एमालेले आफूहरुलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अफर गरेको दाबी गरेका छन् नि । खास कुरा के हो ?
एमालेले कसैलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको छैन । उनीहरुले बोलेको कुरा अफवाह हो । उनीहरुले अनुमान गरेका छन् । बोलेका छन् । एमालेले उनीहरुलाई प्रधानमन्त्री अफर किन गर्ने ?
पार्टीभित्र अन्तर्घात भएको भन्ने पनि छ । नेता–कार्यकर्ताहरु अनुशासनमा रहन नसकेर एमालेले जनमत गुमाएको भन्ने कुरा अध्यक्ष स्वयम् आफैंले गरेका छन् नि ?
पार्टीभित्र खासै अन्तर्घात भएको होइन । अलिकति अराजक देखिएकै हो । आफ्नो मान्छेले टिकट नपाएको भन्ने लागेका केही नेताकार्यकर्ताहरु एमालेलाइ हराउन लागे भन्ने हो । जस्तो अनुशासन हुनुपर्ने थियो त्यस्तो अलिकति नदेखिएकै हो । टिकट वितरणमा सबैलाई चित्त नबुझ्दा अलिकति अनुशासनविपरित कामहरु भएको हो ।
मुलुक अब कसरी अगाडी जानुपर्छ ? गठबन्धनप्रति तपाइंको धारणा के हो ?
देशघाती, दक्षिणपन्थी, अस्थिरताको कारक भनेको यो गठबन्धन हो । अग्रगमनका , सुशासन र देशको हितका लागि यो गठबन्धन टुट्नुपर्छ ।
यो पनि – नेतृत्व बिहिन विवेकसिल साझा : बैकल्पिक पार्टीको अस्तित्व सकिएकै हो ?
अन्तर्वार्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
प्रकाशित मिति : २१ जेष्ठ २०७९, शनिबार १२:०१